Nepal Dayari | साथीको नाम मा कलंक , आफ्नै साथी कवितालाई ढुंगाले टाउकोमा हा”नेर त”ड्पाई त”ड्पाई मा”रे !
साथीको नाम मा कलंक , आफ्नै साथी कवितालाई ढुंगाले टाउकोमा हा”नेर त”ड्पाई त”ड्पाई मा”रे !
चैत्र २३, २०७८ बुधबार ३८३ पटक हेरिएको
बेलका नगरपालिका-३ मा कक्षा १० मा अध्ययनरत छात्रा कविता सुनुवारको ह’ ‘त्या गरिएको अवस्थामा श”ब फेला परेकाे परेको छ । कोशी जनता माध्यमिक विद्यालय रामपुरमा अध्ययनरत कविताको शब ह’ ‘त्या गरेर यसोदा खोलामा फा’लि’ए’को अवस्थामा फेला परेको हाे । उनको श”व हिजो मंगलबार बिहान ७ बजे खोला किनारामा स्थानीयले देखेपछि प्र”हरीलाई खबर गरेका थिए । घरबाट ट्युशन पढ्न निस्किएकी कविताको बाटोमै ज्या’न लि’एर खाेलामा फा’लेकाे अवस्थामा फे”ला परेको उदयपुरका प्रहरी प्रमुख सुवासचन्द्र बोहराले जानकारी दिए ।
जिल्ला प्र”हरी कार्यालय उदयपुरका डिएसपी सुवासचन्द्र बोहोराका अनुसार कविताको ह”त्यामा उनकी १७ वर्षीया साथी र साथीकै दाजु नाता पर्ने १९ वर्षीय बिनोद ढकाल प”क्राउ परे । भारतको सिक्किमस्थित वियुङमा घर भएका बिनोद केहि समयदेखि बहिनीको घरमा बस्दै आएका थिए । कवितालाई बिहानै उनकै साथीले फोन गरेर बोलाएको र बिनोदलाई पनि सँगै गएका थिए । प्र”हरीले फोन रेकर्डका आधारमा दुवैलाई प”क्राउ गरेको थियो ।
प्र”हरीले प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा कविता र उनीसँगै अध्ययनरत अर्की छात्राबीच विगतदेखि झ’ग’डा भएको थियो । प”क्राउ परेकी नाबालिका मृ”तक कविता सुनुवारसँगै कोशी जनता माध्यमिक विद्यालय रामपुरमा कक्षा १० मा पढ्थिन् । पक्राउ गरेर ल्याउदा उनकै साथी र साथीका दाई नाता पर्ने विनोद ढकाल थिए । कविताका घर परिवारले उनीहरुले छोरीमाथि यसरी आ’क्र’मण गर्लान भन्ने सोचेकै थिएनन् । सो झगडापछि कवितालाई तर्साउन भन्दै साथीले दाई नाता पर्ने ढकाललाई पनि लिएर गइकी थिइन् ।
त्यही क्रममा बाटोमा झ’गडा परेको र दुई जना मिलेर ह’त्या ग’रेको प्रहरीको दाबी छ । घटनाको विद्यालय व्यवस्थापन समिति र विद्यालय प्रशासनले विज्ञप्ति निकालेर कडा कानुनी कारबाहीका लागि माग गरेका छन् । प”क्राउ पर्नेमा भारतको सिक्किम राज्य बियुङ स्थायी घर भई बेलका ३ स्थित जितबहादुर ढकाल (खत्री) को घरमा बस्दै आएका १९ वर्षीय बिनोद ढकाल र जितबहादुरकै छोरी १७ वर्षीया सरिता ढकाल (खत्री) रहेको प्र”हरीले जनाएको छ। उनीहरु काका–बडाबाबुका सन्तान हुन्।